4shokelay: November 2010
ယနေ့ ၁၂း၀၀ NLD ရုံးရှေ့တွင် ပြည်သူလူထုနှင့်စကားပြောမည်........
မြန်မာစံတော်ချိန်... ၁၀း၂၀ ရသောသတင်းအရ
ရုံးရှေ့တွင် ပြည်သူတော်တော် များများအန်တီစုကိုစောင့်စိုင်းနေကြကြောင်း
နေ့လည် ၁း၀၀ တွင် မီဒီယာနှင့်တွေဖို့ရှိကြောင်း
နေ့လည် ၂း၀၀ တွင် NLD ပါတီ အဖွဲ့ ၀င် မိသားစု ဇျာပန တစ်ခုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်..........
အချိန်နှင့်တပြေး သတင်းပေးပို့နေသော မိတ်ဆွေများအားကျေးဇူးတင်လျှက်.....
Posted by 4shokelay at 7:51 PM 1 comment:
Posted by HRmyanmar at 6:33 AM No comments:
Daw Aung San Suu Kyi ထွက်ထွက်ခြင်း ပြောသော စကားများ အသံဖိုင်
Posted by HRmyanmar at 5:15 AM No comments:
- မိန့်ခွန်းစပြောပါတော့မယ်။ လူထုက ငြိမ်သွားပါ...ပြီ။
- မတွေ့ရတာလည်း ကြာပြီ၊ ပြောစရာတွေလည်း အများကြီးပဲ။ အဲဒါတွေ အားလုံးကြားချင်ရင် မနက်ဖြန် ရုံးကို လာခဲ့ကြပါတဲ့။
Posted by 4shokelay at 3:42 AM No comments:
အန်တီစုအတွက် အတိုင်းအဆမသိ ၀မ်းသာမိပါကြောင်း
Posted by 4shokelay at 3:33 AM No comments:
Posted by 4shokelay at 3:16 AM No comments:
၄း၀၀ လွှတ်ပေးမယ်လို့ရဲတွေကပြောတယ်တဲ့ 
(ဓာတ်ပုံ - Getty Images) http://www.oneshinwar.co.cc/ မှ
ကုက္ကိုင်းလမ်းဆုံ- ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းဘက်ခြမ်းရှိ လူအုပ်ကြီးက “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ချက်ချင်းလွှတ် ချက်ချင်း လွှတ်” ဆိုသည့် ကြွေးကြော်သံများကို ပြောင်းလဲကြွေးကြော်လာကြောင်း၊ ရွှေဂုံတိုင်ရှိ NLD ရုံးရှေ့တွင် စောင့်ဆိုင်း နေသည့် ထောင်နှင့် ချီသော လူများ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်အနီးသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ပိုမို ကြွေးကြော်လာသည့်အတွက် NLD လူကြီးများ လာ ရောက် ထိန်းသိမ်းနေရကြောင်း၊ လမ်းပေါ်တွင် လူအပြည့်ဖြစ်လာ၍ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်မှု မဖြစ်စေရန် NLD လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် ဦးနိုင်းနိုင်းက လာရောက်မေတ္တာ ရပ်ခံကြောင်း သိရသည်။
Posted by 4shokelay at 1:31 AM No comments:
Posted by 4shokelay at 1:23 AM No comments:
NLD ရုံးရှေ့ ၁၂.၁၁.၂၀၁၀ ဓါတ်ပုံများနှင့် သတင်းအတိုအထွာ
အန်တီ စု လွတ်မြောက်တော့မည် အားလုံးဆောင့် မျှော်နေကြပြီ
နယ်မှပြည်သူများကလဲ အန်တီစုကိုကြိုဆိုရန် ရန်ကုန်သို့ တစ်သုတ်ပြီး တစ်သုတ်တက်လာကြပြီ ဟု
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်မည်ဟု သတင်းများ အတိအလင်း ထွက်ပေါ်နေချိန်တွင် ကခုကဲ့သို့ ပြည်သူများအားတက်သရောမျှော်လင့် နေကြချင်းဖြစ်သည်.......
တချားနိုင်ငံရေး သုံးသပ်သူများကလဲ ပြည်သူ မျှော်လင့်ထားတဲ့ အတိုင်းဖြစ်မလာရင် ပြသနာများရှိလာနိုင်ကြောင်း ပြောကြားနေကြသည်။
ပုံများကို မေးလ်မှတဆင့် ပေးပို့လာသော ရောင်းရင်အားကျေးဇူးတင်လျှက်
Posted by HRmyanmar at 9:50 AM No comments:
Posted by 4shokelay at 10:04 PM No comments:
Posted by HRmyanmar at 8:16 AM No comments:
နအဖ ကြေးမှုန် သတင်းစာ ကို ဟက်လိုက်ပြီ။ ခွပ်ဒေါင်းအလံတင်သွားပြီ။
Posted by 4shokelay at 5:54 AM No comments:
ပြည်တွင်းလူငယ်တစ်ဦး၏ g-talk မှပြောကြားချက်
''မနက်ဖန်မှာလူငယ်တွေအားလုံးက ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ဘို့တွေ လုပ်သင့်တယ် ဘာတွေလုပ်သင့်တယ်ဆိုတော့...... မနက်ဖြန် ရွေးကောက်ပွဲ ကိုမေ့ထားမယ် ပြီးတော့.........
ကျနော်တို့ဆိုရင် မနက်ဖြန်မှာ ပြည်သူစိတ်ဝင်စားတာအရာတွေကို ရပ်ကွက်ထဲမှာကျတော်တို့ လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်
ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာတော့ ခုပြောဘို့ မဖြစ်သေးပါဘူး''
မနက်ဖန် ၇ . ၁၁ . ၂၀၁၀ စစ်အာဏာရှင်ရွေးကောက်ပွဲကြီး လုပ်တော့မယ်ဆိုတာကိုမေ့ထားပြီး မိမိလုပ်စရာရှိတာသာအလေးထားလုပ်ကြရန်နဲ့ မဲရုံကိုမသွားပဲ နေကြဘို့ မဲမပေးကြဘို့
http://4shokelay.blogspot.com/ မှ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်.................
Posted by 4shokelay at 10:01 PM No comments:
Posted by HRmyanmar at 8:11 AM No comments:
Posted by 4shokelay at 4:43 AM No comments:
Labels: ဆောင်းပါး, ကြေငြာချက်